Cinema kancane engaphezu kweyikhulu. Nokho, lesi simo yobuciko is ngakho siqine ezimpilweni zethu, kubonakala, kwaba njalo nathi. Uma ukudanisa izindaba kunodonga, wena ukhathele megablokbasterov futhi ufuna ukuba uthinte yobuciko zabuna emhlabeni, sibheke uhlu amabhayisikobho best of sonke isikhathi. Le misebenzi aziphelelwa isikhathi, ngale ezombusazwe, ngale amazwe amazwekazi. Bafuna ukubukela kanye nokubuyekeza.
10. "2001: A Space Odyssey" (1968)
Esiko ifilimu umqondisi Stenli Kubrika kubhekwa omunye imisebenzi kunabo bonke ekhulwini XX. ababukeli abaningi, letifaka ekhatsi tisebenti leticeceshiwe, uthi bakulungele ukubona futhi ubuyekeze lesi sithombe-sci-fi izikhathi ezingenakubalwa. Ibhayisikobho yomhlaba zabuna ngeke akwenze ngaphandle bands ukuthi ukucacisa imibuzo ebalulekile yokuphila, lapho abalingiswa abasemqoka abazizwa ukuthi uzama ukuthola ukuthi kungani Ngeza kuleli zwe futhi siyini nokubaluleka kwazo yonke. Yini imfihlakalo nhlobo nokuthola ukuchaza umuntu ngesikhathi uhambo eliyingqayizivele. Kulesi ifilimu, eziningi ezimangalisayo visual effects oyowushintsha ayekubona esikrinini esigabeni ngamaphupho nje la. Ngisho nanamuhla ifilimu "2001: A Space Odyssey", esingu cishe isigamu eminyakeni eyikhulu edlule, ngeke ilahleke ku isizinda yesimanje imiphumela ekhethekile engqondweni-ohlabayo.
9. "Citizen Kane" (1941)
amafilimu Brilliant ziqondakala ngokulinganayo nomdlandla wonke amazwekazi, njengoba baze bangabi nasikhathi sokuba imikhawulo. Isithombe kuqondiswe yi Orson Welles ' "Citizen Kane" yathathwa emuva ngo-1941. Nokho, ngisho kulezi zinsuku imisebenzi zakudala cinema emhlabeni uyonika isinkiyankiya abaningi babanjwa ngesakhiwo okuvusa usinga. Ngezinye izikhathi kubonakala sengathi kusukela moviegoers ukuthi into engcono isikhathi eside lithunjwa. Fantasy ifilimu uchungechunge namanje ezingalindelekile futhi ngezinye izikhathi impikiswano. Uma ungazange ukubonile lokhu, sincomela ke ukuba ibukwe. "Citizen Kane" - ifilimu Changeling, ephumela umvuthwandaba izethameli zisuka. Ngaleso sikhathi ukuphila befa iphephandaba magnate, liye lehla izwi ongaziwa eyodwa kuphela, uqala ukuba avale off izinyathelo zabo emuva. Isibukeli bayofunda imfumbe ngamazwi okugcina hero futhi simazi ne nezikhathi ezinzima nezimnandi kwendlela yakhe umatasa. Ibhayisikobho yomhlaba zabuna ngeke ibe ephelele ngaphandle Kulokhu.
8. "umshayeli wetekisi" (1976)
Le movie yathathwa iminyaka engamashumi amane edlule. Abanye ababephila waqonda indaba cool, ezazihlanganisa izigcawu eziningi zodlame. Manje, ngemva kwamashumi eminyaka amane, umbukeli ayinakho ukumangala. Nokho, kusukela ngo-ngokucace kangaka futhi poignantly engakaze wasusa ukuphila ebusuku laseNew York. Usezingeni we namabhayisikobho best of sonke isikhathi ngeke akwenze ngaphandle umsebenzi umqondisi ihlelo okukhulu ubugebengu Thriller Martina Skorseze "Taxi Driver." Umsebenzi okuqala e-master ilula futhi kabuhlungu ecacile. Likhuluma indaba isosha YaseVietnam, abaphethwe nokuqwasha. Ukuze ngandlela-thile ukuhlukanisa ngokwabo kusukela izinkumbulo, Travis enquma uthole umsebenzi enkampanini taxi ngaphambili wendawo. Manje ofakazi nsuku zonke izenzakalo zizimbi. Lokhu kuhlukunyezwa ungokoqobo, it akanawo izilo eyesabekayo. Uqobo kwakungeke kwenzeke ngaphandle iskripthi ebekiwe ngokucophelela, umsebenzi ikhamera ekhaliphile ithalente umlingisi uRobert De Niro.
7. "8½" (1963)
Asikwazanga indiva master cinema Italian umqondisa Federico Fellini kanye nomdlali wamabhayisikobho Marcello Mastroianni. Isibukeli spellbound like imidwebo, akakwazi ukuthatha amehlo akhe isikrini, ngisho noma ngezinye izikhathi abaqondi kwenzekani lapho. amafilimu Brilliant ngibenze enhle okufanele icatshangelwe, ngokuya okuqukethwe, ifomu kanye nokuqukethwe. Futhi manje kuphela kokubukeza isikhathi yeshumi, umbukeli uyakwazi ukubona yisiphi isici. Kulesi ifilimu, eningi amasu ezintsha. Okudalwe isitayela art ngendlu, kubhekwa Apotheosis umqondisi omkhulu Italy.
6. "Mirror" (1974)
Caressed yi Cannes amajaji, umqondisi Soviet Andrei Tarkovsky has kwirekhodi yayo ithrekhi yobuciko eminingi cinematic. Nokho, simo kwethu movie best of sonke isikhathi baba ifilimu "Mirror" nge ukhonkolo kwengqondo eguqa lapho sibhekene Margarity Terehovoy, Oleg Yankovsky, Innokentiya Smoktunovskogo nabanye. Protagonist sinokwesaba ukhathazeka ngokweqile ukulahlekelwa uthando ilungu lomkhaya wakubo lathi ngamunye. Ubizwa ngenkani ukudinga siqu okuhlangenwe nakho kwabo ebuntwaneni. Yonke ifilimu is igcwele ISIFISO efudumele, egcwele izimpawu ezicacile kanye nemifanekiso, kwahambisana ngu izinkondlo Andreya Tarkovskogo. Lokhu wobuciko ithatha okusheshayo ngempela, engena phakathi ekujuleni komphefumulo womuntu.
5. "Vertigo" (1958)
Uhlu emafilimini sonke isikhathi luyobe lungaphelele ngaphandle umsebenzi genius baqaphela uhlobo "horror" Alfreda Hichkoka. umlingisi Brilliant Dzheyms Styuart ukudlalwa movie "Vertigo" umhlala umphenyi abaphethwe ukwesaba sokugembula wokukhulekela izindawo eziphakeme. Ngu ithuba naye waphuma waba ngumlindi ukulandela owesifazane, ngibeleselwa umqondo ukuzibulala. Le filimu ayidingi ukusho lukhulu. Isibukeli egxilile isimo non-komunye, lapho kwelinye ipulangwe kubaluleke kakhulu. Ukubheka kunzima ukufaka phansi.
4. "Godfather" (1972)
Esiko ifilimu shot iqala umsebenzi wakhe ngu Francis Ford Coppola, ke sekuyisikhathi eside ukwahlukana izinkomba kanye has lonke ibutho nabalandeli emhlabeni jikelele. Uhlu emafilimini emhlabeni cinema zabuna amanye Isendlalela sale drama ubugebengu odumile New York mafia clan. Khokha intela hhayi kuphela ukhonkolo okhazimulayo eholwa UMarlon Brando, kodwa futhi simo ehambisana kahle kanye nomkhathi emangalisayo. Itulo esonta kanye ematfuba baye sathatha bonke amagugu ezikhona emphakathini.
3. "The Green Mile" (1999)
On the imisebenzi kukaStefanu King esingu eziningi amabhayisikobho ezinhle. lithathelwe kangcono umbhali ubhekwa "Green Mile." amafilimu zomlando asiyise hhayi kuphela eNkathini Ephakathi, kodwa futhi ngesikhathi esizayo. Le filimu isethwe ejele, "Cold Intaba" ngo-1935, ogama abakhileyo iziboshwa isigwebo sokufa ngokungafanele. ababukeli abaningi bathi babengakaze bakhale izinyembezi ezingaka ngesikhathi ebuka isithombe. Kunoma ikuphi, indaba ethumba umqondisi Frank Darabont ngeke abashiye ubani nandaba.
2. "ohlwini Schindler sika" (1993)
Impi amafilimu kungukuthi njalo igcwele umoya sokufa, kodwa ngaso sonke isikhathi ukuba izinyembezi. Esimeni semakhaya abantu Apocalypse ukudela yonke into bangakwazi kuphela ngenxa inkululeko nensindiso kwanoma iyiphi abathunjwa elingenacala izimo. Okunjalo Oskar Schindler, usozimboni, lowabangela yethenisi impi. ezingokoqobo Unonya kwamphoqa ukuba uhlaziye izinto eziza kuqala ekuphileni kwakhe futhi yaphenduka sezifundo yangempela nomsindisi yamaJuda. Lena ngenye yama-movie engcono, wathwebula Stivenom Spilbergom.
1. "Phuma Redemption" (1994)
Usezingeni yala mafilimu best of sonke isikhathi ngakwesokudla is ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele ngomunye ekudalweni Frenka Darabonta, "I Shawshank Redemption." umbukeli ngasinye siyadingeka ukuze ubuke tape okungenani kanye. Wamangalelwa okabili ukubulala umnikazi ubuso-jele futhi nangobudlova nokungalungi. Nokho, izimo akazange aphule umlingisi lomcoka. Unikezwe isigwebo sikadilikajele Andy Dyufreyn, uhlala indoda ithelela ziboshwa ezase zakhe ezinhle kanye nokuthuthukisa Ukuphunyuka uhlelo kwakwakhiwa ngasese. Nge lokugcina isibukeli imibhalo engezansi ulindele ukuhlanzwa ngokomzwelo.
UVladimir Ivashov, umlingisi we cinema Soviet
Idrama Medical noma umphenyi chungechunge? "Indlu MD": nabalingisi izindima
Kuhle yasekhaya futhi Hollywood ahlekisayo mayelana ejele
John Abraham (Johane Abrahama): Biography, amabhayisikobho, empilweni yakho
Kuyini izinga progesterone 21 ngosuku umjikelezo? Lapho ukuthi zihlolelwe progesterone?
Sandwich 3 1: ujike ibhulakufesi yakho ibe sindiso!
Umuthi 'Warfarin'. Yokusetshenziswa
Isitshalo seqanda Clorinda: Izibuyekezo
Izimpawu kanye nokwelashwa abezindaba otitis
Uyini Ukujikeleza? Hhayi umsakazo kuphela
Green e Fort Belogorsk. Indatshana phezu inoveli by "Ndodakazi uKaputeni sika" Pushkin sika